Onye Kèké Arịọ Enyemaka Dịka Nwunye Ya Mụrụ Ụmụ Ise Otu Ugboro
Dịka a sị na otu onye adịghị achụ ngwere mgbahige aja, otu nwoke na-anyara onye ya keke na Nnewi, bụ maazị Abụchi Odo etiwaala mkpu akwa ma kpọọ oku enyemaka dịka nwunye ya bụ oriakụ Ndidi Odo nyụsịịrị ya ụmụaka ise otu ugboro.
Dịka akụkọ siri kọọ, nnukwu ume mmiri lọrọ nwa amadi ahụ ngwa ngwa ọ natara ya bụ ozi na nwunye ya mụrụ ụmụ ise, bụ nke mezịrị ka ọ tawa akwa, ma tipu ọsọ ozigbo ka ọ gbafuo, n'ihi na ihe karịrị nte abakwutela nte n'ọnụ; mana nwanne ya nwoke tọrọ ya na otu nwoke ọzọ bụ maazị Justin Brown chụsoro ya ozigbo, nwude ya ma kpọghachi ya azụ na ya bụ ụlọ ọgwụ "God’s Mercy Hospital, Obiuno, Otolo-Nnewi".
N'okwu nke ya, nwunye nwoke ahụ, bụ onye e kwuru na ihe ọ mụrụ bụ ejima nwoke anọ na otu nwaanyị, kọwara na ya maghịdị na ihe o bu n'afọ ruru ụmụ ise, ma kwuo na nyocha ya mere gosiri na ọ bụ naanị ejima abụọ ka o bu n'afọ oge ahụ. Ọ sị na ya mụbụrụ ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị anọ na ụmụ nwoke abụọ n'otu n'otu mgbe gara aga, mana e mechaara ụmụ nwoke abụọ ahụ nwụsịa, o wee gbàrazie aka nwa nwoke ma nwezie naanị ụmụ nwaanyị anọ ahụ. O kwuru na ọ bụ ya mezịrị o jiri sị ka ya tụkwuzie otu akpụ ime nke ikpe azụ ka ọ mara ma chi ya ọ ga-enye ya ọ bụrụgodi naanị otu nwa nwoke; Chineke wee wụnyere ya ọmarịcha ụmụ nwoke anọ na otu nwaanyị n'otu ugboro ahụ, iji sị ya jikọlọzie onwe ya. Ya bụ nwaanyị gbara ahọ iri abụọ na iteghete bụkwa onye a kọwara dịka onye na-akwa ákwà n'ụlọ ọrụ mmadụ, ya bụ, onye na-agbara mmadụ odibọ ịkwa ákwà.
Otu ọ dị, ya bụ nwoke na-anya keke kwuru hoohaa na ọ pụghịdị iji keke ahụ wee chụta ihe afọ iteghete ga na-eri n'ezinaụlọ ya, tinyere afọ ya na nwunye ya maka na e jighị mkpụrụ akwụ azụ agụ. Ọ kpọkuzịrị ma rịọ enyemaka ọhanaeze, ndị ụka, ndị ọchịchị, nakwa ndị otu dị iche iche, tinyere gọvanọ Willie Obianọ, dọkịnta Ifeanyị Ụbah, Bishọọpụ Ụka Anglịkan na Dayọsiisi Nnewi, bụ bishọọpụ Godwin Ọkpala, ogbo ya nke ụka Katọliki na Dayọsiisi nnewi, bụ Bishọọpụ Hilary Okeke, na ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọnọdụ ụmụ mmadụ na-emetụ n'obi.